China umenzi wepepper grinder yekofu yokusila yekheramic yokugaya abenzi nabathengisi | Nciphisa
Iiceramic zokugaya ii-cores zenziwe ngezinto ezingaqhelekanga ezinje nge-alumina ezi-sintered kumaqondo obushushu angaphezulu kwe-1300 degrees Celsius. Iimpawu ezizodwa zezinto ezenziwayo zenza ukuba i-ceramic cores cores ibe neempawu zokuqina okuphezulu, ukunxiba ukumelana, ukusasaza ubushushu okukhawulezayo, ukuxhathisa umhlwa, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, kugqibelele kwiziphene zeplastiki okanye iintsimbi zokugaya iintsimbi.
Iiceramic zokugaya ii-cores zenziwe ngezinto ezingaqhelekanga ezinje nge-alumina ezi-sintered kumaqondo obushushu angaphezulu kwe-1300 degrees Celsius. Iimpawu ezizodwa zezinto ezenziwayo zenza ukuba i-ceramic cores cores ibe neempawu zokuqina okuphezulu, ukunxiba ukumelana, ukusasaza ubushushu okukhawulezayo, ukuxhathisa umhlwa, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, kugqibelele kwiziphene zeplastiki okanye iintsimbi zokugaya iintsimbi. Ngaphandle kokusebenza kokugaya okusisiseko kuzinzile kwaye kubiza ixabiso eliphantsi, ngenxa yoko isetyenziswa ngokubanzi kwimarike.
UkuSebenza koMgangatho weCeramic yokuGaya iCore
1.Ukuqina okuphezulu, ukumelana nokunxiba okuhle
Xa kuthelekiswa nesalathiso sobunzima beplastiki engaphantsi kwe-60HRA kunye ne-stainless steel grinding 70-78HRA, ubunzima bokugaya isiseko se-ceramic kunokufikelela kwi-80-85HRA, imveliso iyanxiba ngakumbi, ukusebenza ngokusila kuzinzile, kwaye ukusetyenziswa kunempilo .
2. Akukho lula ukuqhuba ubushushu
Umbindi wokugaya we-grinder uza kuvelisa ubushushu ngexesha lenkqubo yokusila. Xa kuthelekiswa nesinyithi okanye iiplastikhi zokugaya ii-cores, isiseko sokugaya se-ceramic asizukuvelisa ubushushu obuninzi ngenxa yeempawu zokuqhutywa kobushushu, ezingazukuchaphazela incasa yendalo eluhlaza yezithako.
3. Ukuhlamba, ukuxhathisa ukubola
Isiseko sokugaya seCeramic sinokugcinwa kubushushu obuphezulu okanye kwindawo efumileyo, ingonakali, ingabi nomhlwa, ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nempilo yezithako.
4. Ixabiso eliphantsi
Izinto ezingaphiliyo zityebile kwizixhobo, ubuchwepheshe obuvuthiweyo nobuzinzileyo kunye nemveliso, amaxabiso emveliso asezantsi, kunye neenzuzo ezibonakalayo zokhuphiswano.
Iindidi kunye nokusetyenziswa kweetyhubhu zokugaya ze-ceramic
Iimveliso eziphambili zokugaya ze-Ceramic zahlulwe zangamacandelo amabini ezinto ezinobumbano kunye nezicaba. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwiindidi ezahlukeneyo zoomatshini bokugaya okanye bokuhambisa ngombane emakhayeni, zihlala zisetyenziselwa ukugaya ikofu, ityuwa yolwandle, ipepile kunye nezinye iziqholo kunye neenkozo ezahlukeneyo ezincinci, ibe sisixhobo esibalulekileyo sekhitshi kwiintsapho.
Egqithileyo Ifektri ngokuthe ngqo 100ml Banokubulawa Manual yesetyu nepepper Grinder
Okulandelayo: Ibhetri yombane yetyuwa kunye nepepile lokusila i-ESP-1
Umenzi Professional Professional Ubungakanani ezahlukeneyo O ...